အစဉ်အမြဲဖုန်းနှင့်အဆက်အသွယ်စာမျက်နှာကိုဖျက်ဖို့ကိုဘယ်လို - ဖုန်းကို - 2019
သင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် Yandex စနစ်တကျလုပ်ဆောင်နေသည်မဟုတ် site ပေါ်တွင်သြဒီနိတ်၏အလိုအလျှောက်ပြဌာန်းခွင့်မှသတင်းနှင့်ကြော်ငြာကြည့်ချင်လျှင်, သင်သောအရာတို့ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကို fix နိုင်ပါတယ်။
Yandex မှတည်နေရာကို Set
ပထမဦးစွာသင့်ရဲ့ပင်မစာမျက်နှာ Yandex ဖွင့်လှစ်။ သင့်အကောင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်အားဖြင့်အပိုင်းအနီးမျဉ်းပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ "Settings" ကို နှင့် box ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါပေါ်လာသော Menu ထဲမှာအောက်ပါ "ပြောင်းလဲခြင်းစီးတီး".
ထို့နောက်သင်တစ်ဦးပွင့်လင်း tab ကိုအတူ setting များကို Yandex ပေါ်တယ်မြင်ရပါလိမ့်မယ် "တည်နေရာ"။ တစ်ဦး string ကိုရိုက်ထည့်ပါ "စီးတီး" လိုချင်သောတည်နေရာနဲ့စာနယ်ဇင်း "Save".
သငျသညျကို tick အကယ်. "အလိုအလျှောက်မြို့ Define", Yandex အမြဲသင့်ရဲ့ချက်ချင်းတည်နေရာများ၏သတင်းအချက်အလက်များပြပေးလိမ့်မယ်။
သငျသညျ Yandex ၏ပထမဦးဆုံးရှာဖွေရေးစာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်၏ Widgets တွေ၏တည်နေရာကိုပြောင်းလဲပြီးနောက်ရွေးချယ်ထားမြို့အဘို့အမှန်တကယ်ဒေတာပြပေးလိမ့်မယ်။ ယူကရိန်းအနေဖြင့်ဥပမာ, သတင်း, ရာသီဥတုနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များရုရှားအစားယူကရိန်းထံမှသတင်းအချက်အလက်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မည်သည့်ပြီးနောက်ရုရှားကိုမဆိုမြို့, install လုပ်ပါ။
ယခုတွင်သင်သည် Yandex နှင့်နောက်ထပ်အရေးယူမှုမရှိဘဲဒေသကိုပြောင်းလဲဖို့ဘယ်လိုသိသောထို site ၏အိမျစာမျက်နှာပေါ်တွင်ရွေးချယ်ထားသောဒေသအတွက်သတင်းအစာကျွေးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဗီဒီယို Watch: Breaking News: Election commission sent notice to Niti Aayog VC Rajiv Kumar (စက်တင်ဘာလ 2019).